ကြော်ငြာခြင်းအတွက် LED ဗီဒီယိုနံရံမျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
1、 ဘေးကင်းရေး: LED display မျက်နှာပြင်ကိုအနိမ့်ဗို့ DC ထောက်ပံ့ရေးဗို့အားရွေးချယ်ထားသည်, ဒါကြောင့်အသုံးပြုရန်အလွန်လုံခြုံသည်. မည်သည့်ကိစ္စမဆိုအရွယ်နှင့်ကလေးများသည်အန္တရာယ်ကင်းစွာအန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲ၎င်းကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်သည်.
2、 နူးညံ့သိမ်မွေ့: LED ဗီဒီယိုဖန်သားပြင်သည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသော FPC ကိုရွေးချယ်သည်, ဖွဲ့စည်းရန်လွယ်ကူသည်, အမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာမော်ဒယ်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သော.
3、 အသက်ရှည်ရှည်: LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ပုံမှန်ဘဝဖြစ်ပါတယ် 80000-100000 နာရီ, 24 စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆင်ရေး၏နာရီတစ်ရက်, နှင့်၎င်း၏ဘဝနီးပါးဖြစ်ပါတယ် 10 နှစ်ပေါင်း. ထို့ကြောင့်, LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏သက်တမ်းသည်အစဉ်အလာ၏အကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်သက်ဆိုင်သည်.
4、 စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း: ရိုးရာအလင်းနှင့်အလှဆင်မီးခွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ပါဝါအကြိမ်ပေါင်းများစွာနိမ့်သည်, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးပိုကောင်းသည်.
5、 ရိုးရှင်းသောစက်ပစ္စည်း: LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် device ကိုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်, ပုံသေညှပ်တပ်ဆင်ထားသည်, ဝါယာကြိုး slot က, သံဝါယာကြိုး, သံကွက်, စသည်တို့. အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဘာလို့လဲဆိုတော့ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကပေါ့ပြီးပါးလွှာတယ်, နှစ်ဖက်တပ်ကော်ကိုလည်းပုံသေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်. အဘယ်သူမျှမပရော်ဖက်ရှင်နယ် install လုပ်လို့မရပါဘူး, DIY အလှဆင်အရသာကိုခံစားနိုင်သည်.
6、 စင်ကြယ်သောအရောင်: LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်မြင့်မားသောတောက်ပ patch ကိုချမှတ်, ဒါကြောင့် LED အလင်းထုတ်လွှတ်သောဒြပ်စင်၏အားသာချက်များရှိသည်, နှင့်အလင်းအရောင်စင်ကြယ်၏, နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသည်. ၎င်းကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်.
7、 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏ကုန်ကြမ်းများကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးကုန်ကြမ်းများကိုရွေးချယ်ထားသည်, အသုံးချမှုများစွာကြောင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအရာများမဟုတ်ပါ.
8、 အသေးစားအပူ output ကို: LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကို ဦး ဆောင်နေသည်, တစ်ခုတည်း LED ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအလွန်နိမ့်သောကြောင့်,, များသောအားဖြင့် 0.04-0.08w, ဒီတော့အပူ output ကိုမြင့်မားသည်မဟုတ်. ၎င်းကိုငါးတိုင်တွင်အလှဆင်မီးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်, များစွာသောအပူရေအပူချိန်တိုးဖွဲ့စည်းမရှိဘဲ, အရာတန်ဆာဆင်ငါး၏ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်.
9、 ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုစကေး: ယေဘူယျအားဖြင့်အဆောက်အ ဦး များတွင် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ခြေလှမ်းများ, ပြပွဲစင်တာ, တံတား, ဟိုတယ်, KTV အလှဆင်မီး, အဖြစ်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အမျိုးမျိုးသောကြီးမားတဲ့ကာတွန်း, လက်ရေးလှနှင့်ပန်းချီ၏ကြော်ငြာဒီဇိုင်း, စသည်တို့. LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကျွမ်းကျင်မှု၏တဖြည်းဖြည်းခေတ်မီနှင့်အတူ, ၎င်း၏အသုံးပြုမှုစကေးပို။ ပို။ ကျယ်ပြန့်ပါလိမ့်မည်.
ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်၏စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်တွင်မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်?